[OFISIALY] dr.fone - Viber Backup: Mora Backup & Ampodio Viber Internet
dr.fone Toolkit - iOS Viber Backup & Ampodio
Arovy ny Viber Chat History
Backup ny Viber manontolo hiresaka tantara iray tsindry.
Avereno ny tantara Viber mora foana.
Pirenena misy zavatra avy amin'ny nomaniny ho solon'izay ho an'ny fanontam-pirinty.
Mora ampiasaina sy tsy mety ny angona.
Stress Free iOS sy Viber Backup Ampodio
Backup Viber Internet amin'ny iPhone, iPad, na Computer
Mifandray fotsiny ny iPhone na iPad ary tsindrio ny manomboka ny dingana. Ny sisa dia mandeha ho azy. Rehefa afaka izany, dia ho afaka mijery mialoha ny nanohana-up afa-po.
Lahatsoratra, ary ny kofehy mifamatotra azy antso dia nanohana ny tantara.
Click iray hanao Viber Backup
Azonao atao nomaniny ho solon'izay Viber lahatsoratra, kofehy mifamatotra ary miantso ny tantara eo amin'ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
Preview Viber Backup
Azonao atao ny mijery mialoha ny votoatiny ao an-nomaniny ho solon'izay ny Viber, ao anatin'izany ny lahatsoratra, kofehy mifamatotra ary miantso ny tantara.
Avereno Viber Internet Mora
Afaka misafidy ny mijery mialoha izay zavatra ao amin'ny Viber nomaniny ho solon'izay, mba hahafahanao ho azo antoka na ny tahirin-kevitra ny tokony hamerenana amin'ny laoniny.
Pirenena ny Viber for Pirinty natao
Ianao koa dia afaka ny fanondranana izay tianao avy amin'ny Viber nomaniny ho solon'izay ny solosaina toy ny HTML rakitra, ka pirinty azy noho ny famakian-teny, na zavatra hafa.
Izany Viber nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny fandaharam-potoana dia namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Avereno Viber Backup Internet Mora
Avereno izay nomaniny ho solon'izay tsy ampy amin'ny iPhone na iPad. Na, afaka hanondrana ny Internet toy ny HTML antontan-taratasy eo amin'ny solosaina. Afaka foana hanopy maso ny antontan-taratasy sy mifidy izay olona tianao ho sitrana.
Ity rindrambaiko azo antoka sy tsotra ary tsy mety mampiditra ny angon-drakitra tandindonin-doza.
Ny tahirin-kevitra dia tanteraka soa aman-tsara.
Maka minitra ihany.
Angon-drakitra manohana kokoa noho ny hafa karazana vahaolana.
Ahoana no hanova Viber isa
Top 8 Viber zava-manahirana sy ny Solutions
Full Solutions amin'ny Viber Image Olana
3 Vahaolana amin'ny fomba Backup Viber Messages
Ahoana no sitrana voafafa Viber hafatra avy iPhone
Ahoana no mba hamerenana Viber Hafatra avy amin'ny iPhone / iPad
Top 10 tsara indrindra & antso maimaim-poana ao amin'ny iPhone app
Ahoana no hamafa kaonty Viber, Group sy ny Messages